हुप्सेकोटको मुहार फेर्दै छौ : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा - Nawalpur News
हुप्सेकोटको मुहार फेर्दै छौ : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा
भदौ,२१ कावासोती । हुप्सेकोट गाउँपालिका नेपालको गण्डकी प्रदेश अन्तरर्गत नवलपरासी(व.सु.पूर्व) जिल्लामा अवस्थित एक गाउँपालिका हो । साविकको हुप्सेकोट देउराली र धौवादी गाउँ विकास समितिहरुलाई समेटेको हुप्सेकोट गाउँपालिका १८९ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार २५०६५ जनसंख्या रहेको छ जसमा पुरुषको संख्या ११२७२ र महिलाको संख्या १३७९३ रहेको छ । ६ वडाहरुमा विभाजित गाउँपालिका साविकको देउराली गाउँ विकास समिति परिसरबाट गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणका कारण हरेकजसो स्थानीयतह हरु प्रभावित हुँदै आएका छन । संक्रमणको हिसावले हुप्सेकोट अन्य पालिकाहरुको तुलानामा सुरक्षित रहेको देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा कोरोना नियन्त्रण र समग्र पालिकाको विकास निर्माणका सन्र्दभमा हुप्सेकोट गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटा सँग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ उज्यालो सहकर्मी गोविन्द घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानी :
कोरोना संक्रमणबाट जोगिन गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ ?
धन्यवाद ,कोरोना संक्रमणबाट सबैजसो क्षेत्र यतिवेला प्रभावित भैरहेको छ यसबाट प्रभावित नहुने सायदै कोहिपनि छैन । हामि गाउँपालिकालाई सुरक्षित रुपमा राख्न र जोखिमबाट बच्नको लागि दिनरात नभनि काम गरिरहेका छौ । समुदाय स्तरमा कोरोना नफैलियोस भन्नका लागि स्वाथ्यको मापदण्ड अपनाई पालिकाभर सेवा प्रवाह गरेका छौ । त्यसैगरी गाउँपालिकाभर रहनुभएका दिर्घरोगीहरुको पहिचान गरि स्वास्थ्य शाखाबाट निशुल्क रुपमा औषधी वितरण गरेका छौ । यसप्रकार गाउँपालिका सदैव हाईअर्लटको अवस्थामा छ ।
सरोकारवालाहरुसँग कसरी समन्वय भएको छ ?
प्रश्नका लागी धन्यवाद, कोरोनासँग हामि कोहि पनि एक्लै लड्न सक्दैनौ नै, यसका लागि सामुहिक वलको आवश्यकता पर्छ त्यसैले हामिले गाउँपालिकमा रहेका सबैलाई साथमै लिएर अगाडी बढेका छौ । कसरी गाउँपालिकाका नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ यसमै चासो र चिन्ता हाम्रो छ तसर्थ यो वा त्यो भन्दा पनि सवैको सु्झाव लिएर आपसी सहकार्यमा निरन्तर छलफल गर्दै अगाडी बढेका छौ । कामको बाँडफाड गरिएको छ भने आवश्यकता अनुसार । सवैपक्षिय बैठक बसेका छौ । जिल्ला प्रशासना कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्याल सँग नियिमत सम्पर्क र समन्वयमा रहेका छौ । त्यसैगरी राजनैतिक दल सम्मीलित कोभिड १९ रोकथाम समिति छ यसले आवश्यकता अनुसार काम गरिहरेको छ । त्यो मात्रै हैन सवैभन्दा ठुलोकुरा यहाँका वडा अध्यक्ष ज्यूहरुको भूमिका अत्यन्त राम्रो छ उहाँहरुले अधिकासं समस्याहरु वडास्तरमै मिलाएर अगाडी बढिरहनु भएको जुन प्रशंसायोग्य छ ।
कोरोनाले गर्दा व्यवसाय चौपट भएको छ के भन्नुहुन्छ ?
अवश्य पनि हामिलाई थाहा छ , कोरोनाको कारणले सबै क्षेत्र प्रताडित छ व्यवसाय गर्ने व्यवसायी साथीहरु मर्कामा हुनुहुन्छ त्यो अवगत नै विषय हो , त्यसका लागि स्वास्थ्यको पूर्ण मापदण्ड पालना गरि विस्तारै व्ववसाय सन्चालन गर्दैछौ । सबैले स्वनियन्त्रित भएर समाजिक दुरी कायम गर्दै आफुलाई सचेत गराउँदै व्यवसाय सन्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा मेरो छ । सामाजिक दुरी कायम गर्दै व्यवसाय सचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
गाउँपालिकाका तर्फबाट चेतना अभिवृद्धिका काम कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
कोरोना संक्रमणबारे हामिले सुरुवाती दिनदेखी नै मिडियाबाट सूचना जारी गरेका छौ ,सबै वडाहरुमा माईकिङ गरिएको छ भने प्रहरीको नियमित गस्ती भएको छ ।मिडिया बाट सुचना प्रहरी माईकिगै गर्ने वडाबाटै भएको छ । प्रहरीको नियिमत गस्ती भैराखेको छ ।यतिमात्रै होइन संक्रमणको प्रभाव कम गर्न बेलाबेलामा तातोपानी पिउने, तातोपानीले मुख कुल्ला गर्ने, योग तथा व्यायाम गर्ने र ध्यान गर्ने कुरामा सचेत गराइएको छ ।
हुप्सेकोटमा तपाई आइसकेपछि भएका केहि कामहरु जानौ न ?
हुप्सेकोटमा प्रशासनीक नेतृतव नभएको अवस्थामा राज्यले खटाएको जिम्मेबारी पूरा गर्न र स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने शासन व्यवस्था विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई अगाडी बढाउन र संकटमा नागरिकहरुलाई रहात दिुनुपर्ने अवस्थामा प्रशासनीक नेतृत्व सम्हालेर यहाँसम्म आएको अवस्था हो । गतवर्ष भाद्र महिनादेखिका कामहरु रोकिएका थिए भने विभिन्न आयोजनाहरु उपभोक्ता समिति गठन गरि समपन्न गर्नुपर्ने थियो ति कामहरु पूरा भएका छन । सडक निर्माणसँगै विभिन्न आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन। गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा पर्ने ऐतिहासीक ठाउ रुद्रपुर गढीमा होमस्टे संचालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने का सम्पन्न भएको छ त्यसैगरी मूख्य राजमार्गसँग पँहुच स्थापना भएको छ । वडा नं १ , २ र ५ को वडा कार्यालय अलग अलग स्थानमा संचालनको तयारीमा छन, जसले गर्दा वडाबासीहरु प्रतक्ष्यरुपमा लाभान्वीत हुनुहुनेछ । ७ प्रतिशतको पूजीखत खर्च बढेर ५२ प्रतिशत पुगेको छ । थुप्रै कुराहरु भएका छन जुन एकैछिनको अन्तर्वातामा समेटिन नसकिएला ।एक शव्दमा भन्दा विकासले फड्को मारेको छ ।
हुप्सेकोटको मुहारलाई साच्चिकै परिवर्तन गर्न तपाइसँग भावी योजानहरु छ कि ?
हाम्रो गाउँपालिका प्राकृतिक रुपमा निकै सम्पन्न छ । आधुनिक कृषिप्रणाली मार्फत समृद्ध हुप्सेकोट बनाउने योजना हाम्रो छ । गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ६ मा कफि खेतिको उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकोले पालिकाले सो क्षेत्रलाई कफिखेती मोडल कार्यक्रमको रुपमा समेटेको छ । त्यसैगरी गाउँपालिका भित्रैका कतिपय क्षेत्र कागतीको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने देखिएकोले त्यसतर्फ हामीले ध्यान केन्द्रित गरेका छौ । गाउँपालिकाकै तराई क्षेत्रमा धान गहुँ र आलु उत्पादन प्रशस्त हुने भएकोले सो क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौ । उन्नत जातको आलु उत्पादन गरि त्यसको बजार शुनिस्चितताको लागि चौधरी उद्योगग्राम सँग सम्झौता समेत गरिसकेका छौ । अर्को कुरा वैदेशिक रोजगारीबाट आएका जो साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई लक्षित गरेर पशुपालन गर्न चाहनेहरुलाई क्षतिपूर्ति सहितको अनुदानको प्रवन्ध गरिएको छ ।
देशले नै गौरव गर्ने खालको आयोजना धौवादी फलाम खानी बाट स्थानीयले के प्राप्त गर्लान ?
राष्टिय गौरवको आयोजना यस गाउँपालिकामा पर्छ जुन हाम्रो लागी निकै फाइदाजनक कुरा हो । यसले वेरोजगारी समस्या हल गर्नेमा हामी विश्वस्त छौ ।रोजगारीको लागि विदेशमा रहनुभएका दाजुभाई दिदिवहिनीहरु फर्केर आफ्नै गाउँमा साझ विहान घरमै बसेर रोजगारीमा जान पाउनुहुनेछ । दैनिक सयौसवारी साधन उद्योगसम्म पुग्ने हुनाले साना तथा ठुला होटल व्यवसाय संचालन हुन सक्ने सम्भावना छ ।उद्योग सन्चालन भैसकेपछि गाउँपालिकाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी गाँउपालिकाकै विकासका लागि खर्च हुनेछ जसका कारणले हुप्सेकोटको मुहार फेर्न समस्या हुनेछैन । देशका हरेक क्षेत्रबाट फलाम उद्योग अवलोकन गर्न पर्यटकहरु आउने कुरामा दुईमत छैन यसले उद्योगर्यटनमा महत्वपूर्ण सहयोग हुनेछ । उद्योगमा स्थानीयले सेयर लगानी गर्ने बतावरण बन्नेछ । समग्रमा भन्दा धोवादी फलाम खानी हुप्सेकोटको मणी नै हो ।